Danjire Yamamoto oo hal mid ku ammaanay Axmed Madoobe kadib kulankoodii - Idman news
Danjire Yamamoto oo hal mid ku ammaanay Axmed Madoobe kadib kulankoodii
Muqdisho (Caasimada Online) – Taliska ciidamada Mareykanka Africa ee Africom ayaa qoraal uu soo saaray uga hadlay socdaal ay dhowaan magaalooyinka Kismaayo iyo Boosaaso ku tageen taliye Jeneral Stephen Townsend iyo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto.
Qoraalka Africom ayaa lagu sheegay in Townsend iyo Yamamoto ay madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland Axmed Madoobe iyo Saciid Deni kala hadleen dadaallada gobolka iyo muhiimadda ay leedahay sii wadista beegsashada kooxda Al-Shabaab.
“Waxaan ka ammaanay madaxweynaha Jubaland Axmed Madoobe dadaallada wadajirka ah ee ciidamada ammaanka ee Jubaland, Danab, iyo Xoogga Dalka ee Al-Shabaab ku weeraray dooxada webiga Juba,” ayuu yiri Yamamoto.
“Howl-galladaas waxay tusaale u yihiin wada-shaqeynta wax ku-oolka ah ee dolwadda dhexe iyo ciidamo goboleedyada ee dowladda Mareykanka ay raadineyso inay ku taageerto Soomaaliya.”
Yamamoto ayaa ugu baaqay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada inay si wax ku ool ah uga shaqeeyaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen “cadowgooda guud ee Al-Shabaab.”
Africom ayaa sheegtay in safarka Townsend uu muhiim u yahay xoojinta xiriirka militari ee qotada dheer ee Mareykanka uu la leeyahay saaxiibadiisa Bariga Africa.
Previous DAAWO”Hodan Cabdiraxman 14 february Hees Jaceyl Caadi Ahayn. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
Next Ducaale oo ka warramay baxsashadii Janan iyo jidadka xiran ee Muqdisho
Barnaamijka Galab Wanaagsan (18-02-2020) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia
Puntland oo ciidan badan geysay Gaalkacyo xilli ay ka digtay ‘qorshe ay waddo’ DF
Sawirro: Madaxweynaha Dowladda Puntland oo lagu soo dhoweeyay Caasimadda dalka Jabuuti
Ciidamada Kimandoska Gor Gor Qaybtoodii labaad oo malin 3aad kasoo dagay Gagida …
Xildhibaanada labada gole qaran ee guurtida iyo wakilada Somaliland oo qaar kood lahadleen Somali ca
Ciidamada Kimandoska Gor Gor Qaybtoodii labaad oo malin 3aad kasoo dagay Gagida … February 18, 2020
Xildhibaanada labada gole qaran ee guurtida iyo wakilada Somaliland oo qaar kood lahadleen Somali ca February 18, 2020
Barnaamijka Galab Wanaagsan (18-02-2020) – RADIO KULMIYE:: 88.0 MHZ Mogadishu-Somalia February 18, 2020
Xildhibaan Fahiima Yuuf Abdilaahi(Quuje) oo kamid ahayd Xildhibanada Golaha deeg… February 18, 2020